I-china L'Oreal Royal Golden Supplement Cream PR Gift Package abakhiqizi nabaphakeli | I-BXL
Iphakethe lesipho se-L'Oreal royal golden cream PR
Esigabeni sokuqala sokwethula lo mkhiqizo, osaziwayo bazosiza ngokwenyusa, ngakho-ke into yokuqala okufanele uyicabangele lapho uqamba iphakethe ukuthi ungakhanga kanjani futhi uhehe abasebenzisi ngokubukeka nangokubamba, futhi uqhakambise iphuzu lokuthengisa lomkhiqizo.
Ngokuya ngezidingo zekhasimende futhi ngokususelwa kunani lomkhiqizo, i-BXL Creative isungule ithimba lensizakalo yephrojekthi ye-L'Oreal futhi yandizela eShanghai kaningi ukubamba izingqungquthela namakhasimende. Benze ukwenziwa okujulile kwalo mkhiqizo, begxile ezinhlosweni ezintathu zokwakhiwa: ukuthinta, ukungaguquguquki, kanye nokulingana.
Umsebenzi omuhle wokuklama ukupakisha kufanele wenze abantu bafune ukuthinta nokuthenga. Ngokuya ngenani labantu abasezingeni eliphakeme, umklami ucwenge amagama angukhiye wedizayini: umqondo osezingeni eliphakeme, umqondo wekhwalithi, okuthakazelisayo, okuhlukile, okuhle kakhulu, nomphumela wokubonisa.
Umkhiqizo omkhulu waleli bhokisi lesipho se-PR, uju omncane wezinyosi, usebenzisa umpe oligugu weManuka ukugqamisa iphuzu lokuthengisa lomkhiqizo ngokubukeka.
Umsebenzi omuhle kakhulu wokuklama kufanele uhlukaniswe ngokusobala, futhi ukupakisha kwangaphakathi nokupakisha kwangaphandle kufanele kube ngesilinganiso esifanele.
Ukuma kwamabhokisi angaphandle kuyalingiswa kusuka ezindlini zezinyosi, kunanela futhi kugqame izici zokusebenza okuphezulu komkhiqizo, kuthuthukisa imiphumela yokubuka ngemininingwane, futhi kukhombisa ukuhlelwa okuhle kobuhle bomkhiqizo.
Isitayela sesigodlo, umbala wegolide okhazimulayo, ukufakwa kwegobolondo le-arc elibushelelezi, ingaphezulu lebhokisi lesipho liqukethe amandla okulindelwe. Ingaphakathi lamukela imikhiqizo enenani eliphezulu nokuklama okuqaphelayo: iphethini eyakhiwe ngamakhekheba ezinyosi ahlanganiswe nezimbali zikaManuka noju, kuhlanganiswe nokukhanyisa komphumela omuhle kakhulu wokubonisa.
Langaphambilini Ifektri Izitolo Zamabhokisi Wokubonisa Ephrintiwe - I-Chess Makeup - I-BXL Creative Packaging
Olandelayo: Ubudala be-L'Oréal's Perfect Perfect deluxe skincare PR Giftset Packaging Design
Umklamo Nomenzi Wokunethezeka Wokunethezeka
Umklami Nomkhiqizi We-Premium Pr Kit